Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Balanced ဖိအားအပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် Balanced ဖိအားအပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
Balanced ဖိအားအပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက်
HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် Balanced ဖိအားအပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက် in Taiwan။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေး၏အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းရောင်းချသူထံမှရယူဖို့သောဤအသုံးချဖို့တန်းမြင့်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ထုတ်ကုန်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးကြောင့်၎င်း၏ထက်သာလွန်အရည်အသွေးနှင့် Optimum စွမ်းဆောင်ရည်ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ကြီးသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အနှံ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုပြန့်ပွားခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာ availed နိုင်ပါသည်။
ပုံစံ - ALL STAINLESS STEEL No. S72、S72F
DSC အားလုံးသံမဏိမျှမျှတတဖိအား THERMOSTATIC ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်အားလုံး
●အဘယ်သူမျှမချကို AT အသေးစား dribb,အလင်းနှင့်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း,Full Load ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/balanced-pressure-thermostatic-steam-trap-2.html
Balanced ဖိအားအပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ Balanced ဖိအားအပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက် ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ Balanced ဖိအားအပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက် ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan
သံမဏိဖိအားထိန်းညှိမှု DSC CAST IRONမဟုတ်ဘူး.S50、S50F ●သံသတ္တိနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ခန္ဓာကိုယ်,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 17K x ကို 230̊ဂ.. ●Excellent ကချေးခံနိုင်ရည်. ●ဟိုက်ဒရောလ်ရှော့ခ်များကိုအကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●လေပူအပူချိန်တွင်လေနှင့် CO2 ကိုလေမထုတ်ပါနှင့်. ●နောက်ပြန်ဖိအားဆန့်ကျင်ကောငျးမှု. ●ရေခဲသေတ္တာမှပျက်စီးစေနိုင်သည့်ကောင်းသောခံနိုင်ရည်ရှိသည် ●CONDENSATE ၏ပက်ကျိတုံ့ပြန်မှုနှောင့်နှေး. ●အသေးစားနှိုင်းယှဉ်ရူပဗေဒအရွယ်အစား. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.S50
DSC CAST STEEL သည်ဖိအားကိုထိန်းညှိသည့် Termostostatic Steam ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.S61、S61F ●CAST သံမဏိကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 22K က x 320̊ဂ. ●မျှတသောစွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းခြင်း. ●ဝတ်ဆင်ရန်တရားမျှတစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●ကောငျးသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●နောက်ခံဖိအားကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှု,ရေခဲသေတ္တာမှပျက်စီးခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,စနစ် PURGE မှကောင်းသောစွမ်းရည်. ●CONDENSATE ၏ပက်ကျိတုံ့ပြန်မှုနှောင့်နှေး. ●DIRT ကိုင်တွယ်ရန်တရားသောစွမ်းရည်.အမျိုးအစား DSC အဘယ်သူမျှမ.S61
DSC အားလုံးသံမဏိမျှမျှတတဖိအား THERMOSTATIC ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်အားလုံးမဟုတ်ဘူး.S70 ●ALL S.S.ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 32K x ကို 320̊ဂ. ●မျှတသောစွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းခြင်း. ●ဝတ်ဆင်ရန်တရားမျှတစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●ကောငျးသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●လေပူအပူချိန်တွင်လေနှင့် CO2 ကိုလေမထုတ်ပါနှင့်. ●နောက်ခံဖိအားကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှု,ရေခဲသေတ္တာမှပျက်စီးခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,စနစ် PURGE မှကောင်းသောစွမ်းရည်. ●CONDENSATE ၏ပက်ကျိတုံ့ပြန်မှုနှောင့်နှေး. ●DIRT ကိုင်တွယ်ရန်တရားသောစွမ်းရည်. ●အသေးစားနှိုင်းယှဉ်ရူပဗေဒအရွယ်အစား.DSC အမျိုးအစားအမှတ်.S70
DSC အားလုံးသံမဏိမျှမျှတတဖိအား THERMOSTATIC ရေနွေးငွေ့ UNIVERSAL ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူမဟုတ်ဘူး.S79、S79F ●ALL S.S.ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 32K x ကို 320̊ဂ. ●DSC S79 အားလုံးသံမဏိမျှမျှတတဖိအား THERMOSTATIC သံမဏိစကြဝUNာချိတ်ဆက်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်.အပူစုပ်ယူထားသောပေါင်းစည်းယူနစ်သည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောပိုက်မပါဘဲအစားထိုးနိုင်သည်။. ●Excellent ကချေးခံနိုင်ရည်. ●ဟိုက်ဒရောလ်ရှော့ခ်များကိုအကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●ရေပူအပူချိန်တွင်လေနှင့်လေထွက်မထုတ်ပါ. ●နောက်ပြန်ဖိအားဆန့်ကျင်ကောငျးမှု. ●ရေခဲသေတ္တာမှပျက်စီးစေနိုင်သည့်ကောင်းသောခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●CONDENSATE ၏ပက်ကျိတုံ့ပြန်မှုနှောင့်နှေး. ●တစ်နှစ်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုဝန်ဆောင်မှုအာမခံ. ●ပြည်တွင်းစစ်ဆေး Valve optional ကို.DSC အမျိုးအစားအမှတ်.S79
DSC သံမဏိမျှမျှတတဖိအား THERMOSTATIC Steam ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.S80、S80F ●သံမဏိကိုယ်ထည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 32K x ကို 320̊ဂ.. ●မျှတသောစွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းခြင်း. ●ဝတ်ဆင်ရန်တရားမျှတစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●ရေပူအပူချိန်တွင်လေနှင့်လေထွက်မထုတ်ပါ. ●နောက်ခံဖိအားကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှု,ရေခဲသေတ္တာမှပျက်စီးခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,စနစ် PURGE မှကောင်းသောစွမ်းရည်. ●CONDENSATE ပက်ကျိတုံ့ပြန်မှုနှောင့်နှေး. ●DIRT ကိုင်တွယ်ရန်တရားသောစွမ်းရည်. ●SUPERHEATED ရေနွေးငွေ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်မဟုတ်ပါ. ●CAP ဖယ်ရှားပြီးနောက်စွမ်းအားကောင်းစက်ကိုသန့်ရှင်းနိုင်သည်. ●ပြည်တွင်းစစ်ဆေး Valve optional ကို.DSC အမျိုးအစားအမှတ်.S80